Hakinta dagaalkii Tukaraq ee Cabdiwali GAAS, Iyo Damaca Muddo Kororsiga | KALSHAALE
Hakinta dagaalkii Tukaraq ee Cabdiwali GAAS, Iyo Damaca Muddo Kororsiga
Jul 11, 2018 - 24 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Shacabka Puntland oo si weyn uga dhiidhiyey duulaankii Somaliland ku qabsatay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool iyo hanjabaadii ka timid Maamulka Muuse Biixi ayaa su’ aalo badan iska weydiinaya hakadka ku yimid dhaq dhaqaaqii Puntland dooneysay inay ku xoreyso dhulka horey loo qabsaday gaar ahaan gobalka Sool.
Xidiidh kala kalduwan oo aan la sameynay saraakiisha ciidamada ee ku sugan aaga Tukaraq, oo aanu wax ka weydiinay dareenka shacabku ka qabaan hakinta hawlgalka ayaa waxay sheegeen in xukuumadda baaqeedi si weyn looga jawaabey, loona diyaar garoobey in Sool laga xoreeyo Somaliland, laakiin aysan ka soo dhamaan Madaxtooyada Garoowe, iyagoo ka gaabsaday inay ka hadlaan in arrintan la xariirto arrimo siyaasadeed iyo dano kale.
Qalinkii Xuseen Faarax / Lasoco Qaybta Labaad.
awalba waanu ogayn in aanu gaas dhagoole dagalamayn meel cidlo ah in LA fadhiyona mayaqaan gaas dhagolu waxuun buu dagalamaa dagaal markaa socda oo xabadu dhacayso intaa waxii dhaafsan aduu Ku diliy asagooleh goorma ayaynu dagaalka galaynaa iyo meesha maxa la fadhidaan waar inagu kiciya dagaalka waa hadalada ka soobaxa gaas
taliyaa ciidanku markuu yidhaa fadhiiso adeer oo amarka qaado waxa LA ga yabaa inuu toogto talliya oo meeshaa dagaal labo safi kadhaco midakalle ninka reer miyiga ah ama gaas dhagolaa waxa ka danbaysa baahidii reerka xoolahii dhaankii raashinki biyihii xataa waxa u ka fakirayaa dacawada iyo warabaa sidaas oytahay xaalada jirta waxaan kutalinlaa dhibkodii dhib ha ugudarinee iska fasaxa masakiinta
hadaad diidaan nin IGA yaqaan ka waraysta
Xoolahii dadka laga kasbeeyey maxaa ayaga laga yari, mise ayaguna HAKAD/MULUQ MULUQ ayey ku jiraan.
* Doorashadu markey taagantahey loolan dirirkeeda
* Dugaag iyo waxaad aamintaan daalin iyo tuuge, adinkaa durbaanada u tumo oon dareen qabine
* Nimaan daacad idinku maamuleyn digasho mooyaane, adinkaa siduu doonayaba diidey oranayne
* Xilna wuxuu udoortaa nimaan idiin diir nixine, ama wuxuu daldalo raboo duunyo laga raacey
* Hayeeshee dib waxey ka noqon daayinkaa garane.
waxan maqlijiray habar dhali wayday aleelo kuwalatay sxb riyada hala joojiyo
deegaankan in laga xoreeyo jabhada kuso duushay waa lagu khasban yahay gooray noqotoba
kolay waxa socda qorshe larabo in lagagaso saaro ciidamo kujira kuwa jabhada SNM
kana sojeeda gobolka sool inti badnayd kaso baxday inyarba ku hadhay
reer sool iyagaba isku filan haday u diyaar garoobaan inay iska saaraan jabhada
kuso duushay dhulkoda xiliga doorashadu maba dhowa haday tahay 2019
inta kahoraysa lakala baxaya siday aniga ilatahay maamulka putnlaand inuu
mawqifkisa cadeeyo way fiicantahay dadkana shakiga kasaaro WBT
Niyad jab weyn baa Ku dhacay ciddii puntland inay sidan dhaanto aaminsanayd.Ma awalbaanay muuqan inaanu gaas u socon dagaal, ee uu wax ma garatada iskaga jeedinayay buuqan iyo sawaxankan.NASIIB BAAD LEEDIHIIN HADDAANU GAAS IDIN HALLIGIN, EE ISKA NASTA OO ILAAHAY UGU MAHAD NAQA.CAQLI XUMAA, OO MAXAA IDINKU SEEGAN MAAMULKIINA SOWDINKAA ARKAYA INAANU WAX AWOOD AH HAYN,AAN KA AHAYN MALIISHIYAADKAN HADDII DAGAAL BILAABMO OROD GAROOWE KU DHAAFAYA.TOGBA TAGTII BUU ROGMADAA KKKKKKK.WAXAYBA U HADLAYAAN SIDAY AWOOD HAYAAN OO GAAS HOR JOOGO.TAMARTIINA IDIIN RUN SHEEGTAYDEE KKKKKKKKKKKKKKK.
Sida qoraalka ka muuqato anigu ma qabo in Governor Gaas ka cabsadey in reer Sool gooni isu taagidoonaan marka la xoreeyo Laascaanood, laakiin waa nin og baaxadda Ciidamada iyo dhaqaalaha Puntland,
Wuxuu kaloo ogyahey inuusan kaalmo ka heleyn Maamulka Greater Banaadir State maadaama uu ogyahey wuxuu ka geystey Shirkii Kismaayo ee QIYAANO QARAN iyo JILBO QABSIGII Carabtii la ceyriyey, iyo hadalkii Dubai uu ka yiri ee Dowlad kama jirto Xamar,Puntland lagama maamulo Xamar.
Tuulo kasto gooni ula heshiiya, bariba kaalaya Boosaaso bal inuu diido Farmaajo.
* WARIIRI maradaa lagu dilaa.
Kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk
Gaas balan qaadkisii 5 SANO kahor maxaa ka fulay maxaase kafuli waayay laascanood faataxo lagumaqabsan waxaa kadanbaysay tukoraq niiko laguma qabsan kkkkk anigu waa nigii hore idiinku sheegay reerkan darood layidhaa inay idaacad kahan jaban mooyee waa fulay hadaad aragto nin faanaya waa fule
3 nin oo Warsangeli, Dhulabahante iyo Majeerteen ah, 3da nin ugu sareeya Puntland oo is ag fadhiya waa geli la’ayihiin tukaraq oo Garoowe u muutaqa oo gurmad iyo waxwalba sahal kusoo gaari karaan.
Meesha xiniinyaha loo geli waayey yaa ila qiyaasi karin.
Majeerteen fulayo ah marka laga reebo maxay tahay sababta kale?
Qofka aqliga leh, waa ogyahay in la rabo reer Sool hubka u sida Iidoorka in xaajo iyo wada hadal u socdo oo dhinaca kale u wareegaan ana la go’aansado in haddii hadal diidaan ayagana la laayo.
Cadaadiska beesha caalamka looma joojiyeen.
Dagaalka disaster ku dhamaan kartaa oo dhulkaas iyo dadka dega isku burburaan.
War jiraba cakaaro imaan.✊
Mr gaas waa in loogu daraa 4 sano dhulkii dalka budhlandhi ayuu soo celiyay.
Mr gaas ka hor lama sheegin nin dagaal isku dayay oo budhlandhi ah. Wuxuu iska dayay xaniinyo ay isku dayi wayeen cadde iyo faroole. Odayga haloogu daro 4 sano.
Xoolahana halla soo badiyo world koobkii axadda ayuu soo dhamanayaa. Markaas ayuu qaadayaa weerar cir iyo dhul ah. Kudayo dowladda dalka budhlandhi.
Kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk garqaad waad igaqos lisay
ACWW:War maxaa la sheegay wali ma wajigii aan ogaa baad leedihiin.
Anigu waxaan qiyaasayaa in Puntland aanay u socon Laaska.
1-In dhaqaale laga helo shacabkan masaakiinta ee baariga ah.
2-In waqti loogu daro gaas ama dib loo dorrto.
Waxaa ay iila muuqataa arrin uu 2016 kii anigaa diyaarad ka soo raacay dhuusomareeb xamar u soo socda,ayaa nin abtigay ah siyaasina ah wuxuu igu yiri abti shacabka somalida waa shacabka dunida ugu xun.Waxaan ku iri bal abtiyow ii sharax.
Wuxuu yiri waa shacab iska bridge sidii la doono loo isticmaali karo 2 reer ee ugu daran waa Majeerteen iyo Isaaq sababtoo ah waa ugu qabyaalad badan yihiin,ofcourse uguna xun yihiin dhinacyo badan marka laga eego.
Haddii 500-3000 wiil masaakiin ah aanay dhiman,anigu waxaan qabaa guul in ay tahay, waxaase la yaableh ninka Gaas iyo Biixi aanay aqoon haddana reer ku taageeraaya.
All in all ninkii waxaan ka bartay in aan dad xun nahay,qofkii doonan wuxuu doono inoo sheego oo aan isku layn karno.
WAA BEEN MAJEERTEEN IYO ISAAQ AYAA ILBAX AH,CAQLIGOODU WAA QABYAALAD ILLAHAY HAKALA QABOOJIYO SHARKOODANA HANAGA HAYO.
Tukaraq iyo Garoowe 70km meter, labida Gaatama xuduudka Dhulos iyi Habarjeclo iyo Tukaraq 300km..kkkk
Ragaan meesha fadhiya dhaqaaqi la’ayihiin.
Iidoor qooro weyne..
Cali Injir iyo Baashe yaraan ku faraxumeeyey..
Stockholm syndrome igq dheh.
Laakiin ma dheera marka ayaga Iidoorka ciida la cunsiin doono.
Walaahi Iddoorka iyo Cali injirka wataan waa loo dhaarsan yahay.
Imisa sano ayaa Iidoor ku dabagaban eyda iibsadeen.
War aniga Dhulbahante inta Garaadada shireen Somaliland raaceen aniga dabaaldega ugu horeyn lahaa laakiin in beel Harti horgale laga adeejiyo, wsa la is dilin.
War is coming sooner or later.
Maanta Xudun oo buhda Ugadhyahan ayaa ciidan soo dhoobtay Tukaraq, sida u arko Dhulbahante waa midoobi rabaa, ragii Dhuloos oo calan Isaaq ku dagaalamayey calan blue ah xirteen.
Dagaalba waa laga maarmin, insha allah.
Dhul ninkiisii baa leh.
Marka beel walba dhulkeeda ayaga u dowlad yihiin ayaan Sonalinimo in kala baxno iyo wax ku heshiino ka wada hadlin.
Maanta qabiil kale qabiil Somali uma dowladayn karo macal gabooye.
That era is dead.
Wali ma ruwaayadii baad wadaa ahayd nin dhulbahante ah baan dhinaca kale ku arkay….dawaco daymada ma dayso.
War dadka ha waalina meesha waxba kuma haysaanee.
Land of Punt sxb maad xaqiiqada waajahdaan oo indha adayga iska daysaan.Hadii Somaliland dhowrkaa qof wataan sidaad aaminsantahay reer sool oo dhamina idin rabo barako daridinaa may muuqato?.Sidan Ku ceebowdee maxaa idiin talo ah kkkkk.Maliishiyaadkiina hanfiga Ku harraadee kkkkk.mise xaalku waa nin qoyani biyo iskama dhawro.
In 10 years you were saying war is coming soon or later…
oo boqatay jiidaha sidii ina samatar bey iyaduna
Ari ku deqday caawa buhodle bey dhaanto ku
Haweenkii in loo diro furinta hore miyey ka dhamaan weyday.
War bal iyaga aaga hore hallagu tijaabiyo mindhaa ragga dhamaane.
Kkkkkk, maalintay Butiland ku xun tahay Waxaan ka gartaa waxa uu qoro allsanaag: Video ka sheekaynsya jidka ceeldaahir ayuu soo dhigaa oo uu ugu talo galay qurbajoogta Waroos. Jidkaasi waa been Faroolanna waxa uu odhan jiray Dekadda Laasqoray baan dhisayaa Xaa ku been ah!
Waxa loo dagaalimi la’ayahay ma fahmi kartaa?
Aqli waa in lagu dagaalo, kaad u dagaalaysay in kula dagaalayo,
maaha arin sahlan.
Idinka kuwiina Hawiye dagaalka sugi la’dihiin. Alaa idinka weyn.
Iidoor iyo horgale Dhuloos dhinta midna ma rabo, dhooda maxaan ku falin.
Borana iyo Gabilay ku noqda.
Xitaa Alshabaabkii Garacad iyo Garmaal dhiigooda ma rabin.
Dagaalka mar ayuu kugu qaajib yahay hadaad rag tahay= markaad dhulkaaga, maalkasgw iyo dadkaaga difaacayso.
Dagaalkaan Tukaraq i don’t like it.😢
nimanka isaq waan necbahy hadana markaan soo galo kalshaale commentigooda bn akhristaa waa niman funy ah waxyar oo kooban oo mugwayn bay qorayaan
Xaq ku been ah lool war jidka waa socda ilaa
Ceerigaabo wuu garaya dekeda laasqoray iyadana
2019 ayaa qorshuhu yahay in la dhiso lool